मेसीलाई कारबाही हुने खतरा ! « Asia Sanchar : Nepal News Live
मेसीलाई कारबाही हुने खतरा !
एजेन्सी, वैशाख २१ – सोमबार राति बार्सिलोनाका कप्तान लियोनल मेसीले बार्सिलोनाका सहकर्मीलाई खानाका लागि आफ्नो घरमा स्वागत गरे। बार्सिलोनाका खेलाडीहरुको उक्त ग्यादेरिङलाई भ्यालेन्सियाविरुद्धको जीतको खुशी र एथ्लेटिको मड्रिडविरुद्धको खेलअघिको रणनीतिकारुपमा लिइएको थियो।
तर, स्पेनिस सञ्चारमाध्यमका अनुसार सो ग्यादेरिङका कारण मेसी समस्यामा पर्ने भएका छन्। ला लिगाले मेसीलाई अनुशासनको कारबाही गर्न सक्ने रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ। मेसीले ला लिगा र त्यहाँको सरकारको नियमविपरीत ६ जनाभन्दा बढी व्यक्तिलाई जम्मा गरेर कोभिड–१९ संक्रमण कम गर्नका लागि बनाइएको नियम उल्लंघन गरेका थिए।
मेसीको घरमा बार्सिलोनाका खेलाडीको ग्यादेरिङलाई नियमको गम्भीर उल्लंघनको संज्ञा दिइएको छ। बार्सिलोना सिनियर टिमका प्राय सबै खेलाडी र उनीहरुको पार्टनर पनि डिनरका लागि मेसीको घर पुगेको रिपोर्टमा दाबी गरिएको छ। तर, बार्सिलोनाले खेलाडीले नियमको पालना नगरेको कुरा अस्वीकार गरेको छ। कोभिड–१९ को जोखिम र त्यसको नियन्त्रणका लागि बनाइएको नियमलाई खेलाडीले पालना गर्दै सुरक्षामापदण्ड अपनाएर ग्यादेरिङ गरेको बार्सिलोनाको दाबी छ।